ဖြစ်သော CBS နှင့် Viacom ဆိတ်ကွယ်ရာ 13 နှစ်ကြာပေါင်းစည်း - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » စီးပွားရေး "ဖြစ်သော CBS နှင့် Viacom ဆိတ်ကွယ်ရာ 13 နှစ်ကြာပေါင်းစည်း - BGR
ဖြစ်သော CBS နှင့် Viacom ဆိတ်ကွယ်ရာ 13 နှစ်ကြာပေါင်းစည်း - BGR
အများကြီးထင်ကြေးပြီးနောက် Viacom နှင့်ဖြစ်သော CBS 13 ဆိတ်ကွယ်ရာနှစ်အကြာတွင်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြသည်။ အစောပိုင်းနေ့လည်ခင်းအသုံးပြုပုံနှစ်ခုမီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်တရားဝင် ViacomCBS လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီသစ်သို့ပေါင်းစည်းဖို့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြသည်။ တစ်ချိန်ကပေါင်းစည်းတရားဝငျမှတျပုံတငျ, Viacom, ဘော့ Bakish ၏ CEO ဖြစ်သူကုမ္ပဏီ၏ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ Bakish တစ်ဦးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုပါတယ်အနည်းငယ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဦးတည်းဖြစ်လာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြည့်စွတ်စွမ်းရည်စည်းလုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "ဖြစ်သော CBS နှင့် Viacom ယခုအရေးပါသောနေ့ကများမှာ
"တစ်အကြီးစားအပေါ်တစ်ဦးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရိသတ်ကိုများအတွက်အရည်အသွေးအကြောင်းအရာနှင့်လူကြိုက်များထုတ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောစွမ်းရည် - နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ကိုတည်နေရာအနေဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းငါတို့နှင့်ပလက်ဖောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးတိုးမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် လာ, "Bakish ကဆက်ပြောသည်။
အမှန်မှာထိုအသစ်သောပေါင်းစည်း Showtime, MTV, BET, ဟာသဗဟိုနှင့်ထို့ထက် ပို. အပါအဝင်ယင်း၏ထီးအောက်မှာမီဒီယာဂုဏ်သတ္တိများ, တစ်ဦးအထင်ကြီးစာရင်းထဲမှာပါတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုမှတပါး, ViacomCBS ယခုကဲ့သို့ခေါင်းစဉ်အပါအဝင်စာရင်း 140 0003600 ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲနှင့်ရုပ်ရှင်ကျော်တစ်ဦး catalog ကမ်းလှမ်း Star Trek et Impossible မစ်ရှင် .
သင်ကုမ္ပဏီသစ်၏အရွယ်အစားနှင့်စပ်လျဉ်းစိတ်ကူးတစ်ခုပေးဖို့, သတင်းထုတ်ပြန်ချက် Viacom နှင့်ဖြစ်သော CBS တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုပြီးခဲ့သည့်လက 13 အတွက် 12 ဘီလီယံသုံးစွဲကြောင်းမှတ်ချက်ပြုထားသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်, ကုမ္ပဏီသုံးခုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုမဟာဗျူဟာကိုဖော်ပြထားတယ်:
စားသုံးသူနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာအရှိန်အဟုန်မြှင်။ အတူတူ, ထိုပေါင်းစပ်ကုမ္ပဏီစားသုံးသူနှင့်အတူ၎င်း၏ပိုမိုစုံလင်လာအစုစုနှင့်သက်သေကမ်းလှမ်းမှုစာရင်းပေးသွင်းမှုနှင့်ကြော်ငြာနှစ်ဦးစလုံးမှကျေးဇူးတင်စကားင်း၏တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာအရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့်တိုးချဲ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါကပရီမီယံအကြောင်းအရာများကိုထားတဲ့ဖြစ်သော CBS နှင့် Showtime All Access, နေထိုင်ပြီးသန်းပေါင်းများစွာမှဝယ်လိုအားအပေါ်လည်းပါဝင်သည်; pluto တီဗီ, US မှာပထမဦးဆုံးအခမဲ့ streaming တီဗီဝန်ဆောင်မှု။ ထိုကဲ့သို့သော SNBC နှင့်တိုက်ရိုက်နှင့် Noggin အဖြစ်နှင့်နယ်ပယ်ထုတ်ကုန်။ ဒါဟာအစကြော်ငြာအားဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရေးနှင့် subscription ကိုကမ်းလှမ်းမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ယင်း၏အားသာချက်ပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်တကမ္ဘာလုံးကိုချဲ့ထွင်ရန်စွမ်းရည်, ပေါင်းစပ်စာကြည့်တိုက်များ, အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များနှင့်နိုင်ငံတကာအခြေခံအဆောက်အအုံရှိပါတယ် ။ ရိုးရာပလက်ဖောင်းအသစ်အပေါ်ပေါင်းစပ်ကုမ္ပဏီ၏အတိုင်းအတာ၏အနံနှင့်အတိမ်အနက်ကို - အမေရိကန်ကြည့်ရှု၏ 22% အပါအဝင် - ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ကြော်ငြာများအတွက်အရေးပါသောအသစ်သောအခွင့်အလမ်းများ generate ပါလိမ့်မယ်။ လက်လီရောင်းချသူများအဘို့, ဒီကပိုကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်မျက်နှာစာဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန်နှင့်ပေါင်းစပ်အစုစုကိုမှ retransmission သဘောတူညီခကျြ၏အကျိုးကျေးဇူးများလျှောက်ထားရန်ကိုဆိုလိုပါသည်။ ကြော်ငြာရှင်များနှင့်အေဂျင်စီများအဘို့, ပေါင်းစပ်ကုမ္ပဏီထိုကဲ့သို့သောအရာလိမ့်မည် CBS Interactive မှ, Viacom နှင့် Viacom နှုန်း Vantage, အဖြစ်တစ်စျေးကွက်ဖြေရှင်းချက်အစုစုနှင့်ထူးခြားအဆင့်မြင့်ကြော်ငြာအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ဦးဦးဆောင်အကွာအဝေးပူဇော်ပါလိမ့်မယ် အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဖြေရှင်းချက်မှလျှောက်ထားခြင်းနှင့်တိုးချဲ့။ တစ်ခုလုံးကိုအစုစု၏စာရင်း။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတတိယပါတီပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တစ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးအကြောင်းအရာလိုင်စင်ထုတ်ပေးဖန်တီးပါ။ ကမ်ဘာပျေါတှငျပရီမီယံအကြောင်းအရာအကြီးဆုံးပံ့ပိုးပေးတစ်ဦးအဖြစ်, ထိုပေါင်းစပ်ကုမ္ပဏီကောင်းစွာကြေးပေးသွင်းခြင်းဖြင့် MVPDs, ထုတ်လွှင့်ကွန်ရက်များနှင့်ကေဘယ်လ်ထုတ်လွှင့်န်ဆောင်မှုများအပါအဝင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းမှအကြောင်းအရာကယ်နှုတ်တော်မူရန်နေရာ streaming များ, မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်လူမှုရေးပလက်ဖောင်း။ အထူးသဖြင့်, အကြောင်းအရာလိုင်စင်မှတပါး, CBS နှင့် Viacom ကွန်ရက်နှင့်မူရင်းပရီမီယံအကြောင်းအရာအတွက်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်တတိယပါတီပလက်ဖောင်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်များအတွက်မရှိမဖြစ်စောင့်ကြည့်ဖို့အစီအစဉ်များကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနေကြသည်။
Image ကိုရင်းမြစ်: မာကု Lennihan / AP / Shutterstock
Sosucam လက်အောက်ခံ Somdiaa, အ 124-2018 မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်းသကြား 2019 တန်ချိန်စံချိန်ထုတ်လုပ်မှုရောက်ရှိ
အခြားကုမ္ပဏီများအတူတူပြုကြပြီပြီးနောက် Facebook ကအသုံးပြုသူရဲ့အသံများ၏လူ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အဆုံးကိုထည့်လေ့မရှိ